» यी हुन् नेपाल आईडल सिजन ३ का उत्कृष्ट ३ फाईनालिष्ट
यी हुन् नेपाल आईडल सिजन ३ का उत्कृष्ट ३ फाईनालिष्ट
७ भाद्र २०७७, आईतवार २०:२५
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ७ भदौ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडल सिजन ३ मा अन्तिम ३ फाईनाष्टिहरु छानिएका छन् । प्रतियोगिताका उत्कृष्ट ३ प्रतियोगीहरुमा सज्जा चौलागाई, प्रविण बेड्वाल, र किरणकुमार भुजेल रहेका छन् । यस भिडियो सामग्रीमा यी नै ३ प्रतियोगीहरुको बारेमा छोटो जानकारी र उनीहरुले पाएका अवार्डहरुका बारेमा चर्चा गरिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो फिचर–
१) सज्जा चौलागाइ– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् सज्जा चौलागाई । नेपाल आईडलमा सर्वाधिक अवार्ड जितेकी सज्जाले यो सामग्री तयार पार्दाको समयसम्म १६ वटा अवार्ड जितिसकेकी छिन् । आईडल दाबेदारका रुपमा उभिएकी सज्जा चौँलागाई पहिलो महिला नेपाल आईडल बन्नसक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । सज्जाले ५ वटा रेक्सपेक्ट पर्फोमेन्स अवार्ड, ३ वटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड र ८ वटा पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी छिन् ।
२) प्रविण बेड्वाल– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येका एक प्रतियोगी हुन् प्रविण बेड्वाल । प्रविणले नेपाल आईडलको स्टेजमा अहिलेसम्म १२ वटा अवार्ड जितेका छन् । प्रविणले ८ वटा पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड र ४ वटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स आफ द विक अवार्ड जितेका छन् । उनले दुई पटक सर्वाधिक भोट पनि प्राप्त गरेका छन् ।
३) किरण कुमार भुजेल– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येका एक प्रतियोगी हुन् किरण कुमार भुजेल । वाईल्ड कार्ड राउण्ड जितेर फाईनलसम्म आईपुगेका छन् । किरणले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म ६ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले ४ वटा अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड, एउटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड र एउटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड जितेका छन् । उनले वाईल्ड कार्ड राउण्ड सहित २ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका छन् ।
अडिसन राउण्डदेखि नै चर्चामा रहेका किरणले स्कुले जिवनदेखि नै गाउन सुरु गरेका हुन् । कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दाको समयमा नै उनले गीत गाएको अनुभव छ । दाईले गाएको देखेर दाईकै नक्कल गर्दै गीत गाउन थालेका किरण एसएलसी सकाएपछि वि.सं. २०६५ सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए । काठमाडौँमा आएर सँगीत विषय अध्ययन गरेका किरणले ललितकला क्याम्पसबाट संगितको औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । संगितमा नै स्नातक गरेका किरणले वि.सं. २०६५ सालतिर पहिलो पटक आफ्नै गीत निकालेका थिए । ५० वटाभन्दा बढी गीतहरुमा आवाज दिईसकेका किरण अहिले जे ब्याण्डमा आवद्ध छन् । उनका विभिन्न गीतहरु चर्चामा छन् ।